Nice Help | Support for Artists, Musicians, Writers
Lacagaha Gurmadka ee Rauschenberg
CERF + Sanduuqa Gargaarka Degdegga ah ee Farshaxanka
CERF+ emergency assistance includes grants and/or brokered assistance, such as booth fee waivers and discounts or donations on supplies and equipment
Sanduuqa Degdegga ee Qoraaga ah ee PEN America
See guidelines for evaluating credentials.
Qoraayaasha Queer ee Sanduuqa caawinta
Waqtigaan, waxaan awoodnaa inaan siinno ugu yaraan $ 100 ugu badnaanna $ 500
Sanduuqaani waxaa loogu talagalay qoraayaasha oo kaliya, mana aha ururro ama faa'iido-doon, kuwaas oo hadda u baahan gargaar maaliyadeed
One-time grants of $5,000 to support artists facing dire financial emergencies due to COVID-19
See elegibility inside.
See elibility for experimental artists inside
Hal-deeq oo loogu talagalay kuwa aan awoodin inay iska bixiyaan kharashaadka nolosha ee aasaasiga ah sida cuntada, guryaha ama daryeelka caafimaadka
Lacag ayaa loo heli karaa shaqaalaha ururada shaqaalaha iyo kuwa ka madaxbannaan madadaalada iyo fanka.
Waa inuu lahaadaa dakhliyada warshadaha madadaalada in kabadan $ 6,500 seddexdii shantii sano ee lasoo dhaafay. Dakhliga waxbaridda ma u qalmo. Qoob-ka-ciyaarayaashu waa inay ahaadaan dukumiinti sedex sano ah oo dakhliyada dhaansiga ee ugu dambeeyay ugu yaraan $ 2,000 sanadkii.
Caawinaad maaliyadeed oo deg-deg ah ayaa loo heli karaa xubnaha SAG-AFTRA ee aan awoodin inay bixiyaan kharashyadooda nolosha aasaasiga ah (cunto / guri / daryeel caafimaad)